Sida loo sameeyo astaanta Adobe Illustrator talaabo talaabo | Hal-abuurka Online
Lola curiel | | muujiye, Tababarada
Astaantu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee muuqaalka astaanta ah, waxay awood u leedahay inay u gudbiso dadweynaha waxa nuxurkiisu yahay waana astaan ​​aad u xoog badan. Casharkaan waxaan ku tusi doonaa aaladaha aasaasiga ah ee Sawir qaade u bixiyo naqshadeynta astaanta waxaanan ku bari doonaa sida looga faa iideysto. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo abuuro astaan ​​leh Adobe Illustrator, ma seegi kartid qoraalkan!
1 Logo, isotype ama male-awaal
2 Abuur dukumiinti cusub oo muujiye ah una fiirso tusaalaha
3 Abuur dhammaan qaababka lagama maarmaanka u ah Adobe Illustrator
3.1 Jirka guumayska
3.2 Isha guumayska
3.3 Nuqul oo rogrog si aad isha kale u abuurto
3.4 Ku abuuri baalka aaladaha dariiqa ama qalinka
4 Midab iyo jaranjarada astaantaada Sawirka
5 Nooca sawirka
6 Sida loo habeeyo noocyada farta ah ee Adobe Illustrator
7 Tijaabi astaamahaaga mockups ee Photoshop
Logo, isotype ama male-awaal
Caadi ahaan, waxaan u adeegsannaa ereyga astaan ​​si aan ugu tixraacno calaamadda u taagan astaanta. Si kastaba ha noqotee, ereygan si buuxda looma adeegsan. Kahor intaanan bilaabin naqshadeynta, aan iska nadiifino tan.
El logo waa astaanta u taagan astaanta oo ka kooban sawirro iyo qoraal (ama qorista qoraalka).
Markay astaanta kaliya ka kooban tahay sawir, qoraal la'aan, waxaa ka saxsan isticmaalka ereyga isotype.
Waxaa jira noocyo mararka qaarkood u adeegsada qaybaha kala duwan ee astaantooda si madax-bannaan. Tusaale ahaan, Nike waxaa badanaa matala oo keliya Dabaal. Marka sawirka astaanta lala xiriirinayo astaanta iyada oo aan loo baahnayn in lagu weheliyo qoraalka, waxaan tixraaci karnaa sida sawir ahaan
Abuur dukumiinti cusub oo muujiye ah una fiirso tusaalaha
Aynu abuurno a dokumenti cusub. Waxaan siin doonaa miiska shaqada a Cabirka A4, sidaa darteed ma waayi doonno meel aan ku shaqeyno. Waan badalay qaabka midabka RGB.
Waxaan ku bilaabi doonnaa astaan ​​fudud oo aan horey u sii qorsheeyay. Raadinta tusaalahan, waan arki doonaa talaabo talaabo ah sidaan u abuuray iyo qalabkee. Iyaga ayaa ah inaad hesho fikrad ah sida aad uga faa'iideysan karto waxa sawir-bixiyuhu bixiyo. Markaad jabiso astaanta, waan aragnaa taas Waxay ka kooban tahay qaabab isku dhafan iyo qoraal.
Abuur dhammaan qaababka lagama maarmaanka u ah Adobe Illustrator
Aynu xoogga saarno qaababka marka hore. Bar-tilmaameedka, waxaad ka heli doontaa qalab qaabab. Adoo gujinaya, waxay na siineysaa ikhtiyaarka aan ku abuuri karno leydilo, xusullada, xiddigaha, geesoolayaasha ama qaybaha safka. Xaaladdan oo kale, waxaan u baahanahay samee leydi. Xulo qalabka iyo jiirka jiidaya abuuro leydi oo qiyaastii ah cabirka aad ku aragto sawirka kore.
Sideen uga bixi karnaa leydikan le'eg oo u sameysan qaab ka kooban jirka guumayska? Waxaan u baahanahay inaan xoqno, taasna waxaan u leenahay qalabka xulashada tooska ah on toolbar ah. Markaad doorato, waxaad ku arki doontaa taas xagasha leylaadka nooc ka mid ah maareeyayaasha (wareegyada). Haddii aad midkoodna toos u jiido waxaad arkaysaa in geesaha wareegayaan. Si aad u xoqdo hal gees, kaliya dhagsii ka dibna jiid. Waxaad arki doontaa in geeskaasi uu dhaqaaqayo inta hartayna sidii ay ahaan jirtay.
Waxaan ka bilaabi doonnaa geeska bidix ee hoose, waxaan xamili doonaa xadka. Waxaan usocon doonaa dhanka bidix ee kore ugu dambeyntiina waxaan ku wareejin doonnaa midigta kore. Sidan ayaad ku heli doontaa qaabka aad rabto.
Wide si aad ugu fiirsato tusaalaha. Indhuhu waxay ka samaysan yihiin qaab isku mid ah jirka iyo laba wareeg, midba midka kale gudaha. Waxaan abuuri doonnaa a leydi yar yar oo waanu duubeynaaWaa sidii aan ku sameynay tillaabadii hore. Hadda, waxaan abuuri doonnaa wareegyada. Xullo qalab ellipse. Si loo abuuro goob wareeg ah waa inaan riixnaa furaha wareeji intaad jiidanayso, haddii kale way is beddeli kartaa oo waxay noqon kartaa mid ka mid ah ellipse badan goobada.
Mar alla markii aan helno dhammaan walxaha isha, waxaa la joogaa xilligii la isku soo ururin lahaa. Hawl kasta oo naqshad ah oo aad ku sameyso Sawirka qalabka isku toosan waa aasaasi. Waxaa laga yaabaa inaadan haysan wax muuqda, waxaad mar walba ka geli kartaa gudaha daaqad>safka. Waxay si otomaatig ah kaaga caawin doontaa inaad isku waafajiso walxo kala duwan. Waad tixraaci kartaa sabuuradda, xulashada, ama sheyga muhiimka ah. Si aad isugu toosiso waa inaad doorataa dhowr shay iyo edooro ikhtiyaarka iswaafajinta. Haddii aad rabto inaad doorato shey tixraac ah, samee xulashada iyo dhagsii sheyga aad rabto inaad ubadasho shay muhiim ah adigoon wax fure ah riixin. Waxaan udhigi doonaa ardeyga gudaha qeybta isha kore.
Nuqul oo rogrog si aad isha kale u abuurto
Haddii aad ogaato, isha kale waa isku mid laakiin waxay ku taal booska ka soo horjeedka. Si aan dib loogu celin hawsha oo dhan, waxa aan sameyn doonno ayaa ah labanlaab hore loo abuuray. Waxaad ku sameyn kartaa amar + c (nuqul) ka dibna amri kartaa + v (dhaji) ama waad dooran kartaa riix furaha xulashada oo jiido. Si aad u rogto, guji dusha, iyo qaybta guryaha, qaybta "beddel", astaamaha lagu muujiyey sawirka kore, waad rogi kartaa qaabka, kiiskan waxaan u baahanahay inuu noqdo mid jiifa.
Ku abuuri baalka aaladaha dariiqa ama qalinka
Aynu ku noqonno qaabkii weynaa, waxaad arki doontaa inay leedahay nooc baal ah. Xaqiiqdii waa qaab isku mid ah oo aan u isticmaalno jirka, gadaalna loo rogay oo la rogay. Waxaan ka faaiidaysan doonaa fursadan si aan u sharaxo laba qalab oo aad u faa'iido badan abuurista astaamo: aaladda qalinka iyo dariiqa wadada.
La qalabka qalinka Waxaad ku haysataa barta garabka oo waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro baalka. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud. Sifudud dhagsii si aad u sameysid geesaha oo khadadka ayaa si otomaatig ah loo sawirayaa si loogu biiro.
Hab kale oo loo dhiso garabka waa adoo adeegsanaya dariiqa dariiqa. Haddii aadan haysan wax muuqda, waxaad ka heli doontaa daaqadda tabka> Pathfinder. Qalabkan waxaad isugu dari kartaa ama ka goyn kartaa qaybo. Xaaladdan oo kale waa inaan doorannaa ikhtiyaarka: wejiga hore. Sii nuqul qaabka jirka, gadaal u dhig sameynta baalka oo nuqul mar labaad, riix wax yar xagga hore oo tirtir xad-dhaafka. Waxaan horey u lahaan laheyn garabkeena. Marka qaababka oo dhan la abuuro, waad soo ururin kartaa astaanta.
Midab iyo jaranjarada astaantaada Sawirka
Illaa iyo hadda ma aynaan taaban arrinta midabka. Waxaa muhiim ah in markaad naqshadeyso astaantaada inaad fiiro gaar ah u yeelatid midabka, dooro codadka iswaafajinaya oo matalaya ruuxa astaanta. Waxaan doortay midab casaan ah, waxaan ka tagi doonaa koodhka midabka kore haddii ay adiga kuu shaqayso. Indhaha ma buuxsamaan, waa khad cad oo dhumucdiisuna tahay 0,25.
Qaybta casaanka ee jirka ma aha midab fidsan, waxay leedahay a duleeyey. Waxaa jira fikrado iska soo horjeeda oo ku saabsan astaamaha leh ama aan lahayn kala-qaadis. Kahor intaadan isticmaalin waxay ahayd khatar sababtoo ah garaafku wuu lumi karaa markii uu u soo dirayo shabakadda. Si kastaba ha noqotee, tani waa dhibaato laga adkaaday. Noocyo badan ayaa u adeegsada kala-goysyada astaantooda, noocyada sida loogu aqoonsan karo Instagram. Anigu shaqsiyan waan jecelahay iyaga maxaa yeelay, haddii si wanaagsan loo isticmaalo, waxay ku darayaan mug astaanta.
Si aad u dalbato gradients, waa inaanu xulnaa aaladda gradient-ka oo labo jeer aan guji shayga. Waxaan ku gaabin karnaa adigoo riixaya G ee kumbuyuutarka iyo laba-gujinta Qeybta guryaha, ee kala qaadista, waxaad dooran kartaa nooca kala qaadista oo aad soo bandhigto menu si aad ugu beddesho saddexda dhibcood. Xaaladdan oo kale waxaan dooranay darbi jiif ka socda madow oo u baxaya caddaanka oo waxaan u beddelnay midab madow oo casaan ah caddaankana waxaan ku beddeleynaa casaan aad u fudud oo u dhow cad. Adigoo dhaqaajinaya baarka u muuqda qaabka iyo dhibcaha, waad wax ka beddeli kartaa booska iyo qaab dhismeedka wejigiisa.
Qoraalku wax dhib ah ma leh, waxaa lagu qoray farta loo yaqaan 'Oswlad Medium font', oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto Google Fonts. Waxaan siinay cabir ka kooban 17 dhibcood oo waxaan dooranay midab casaan isku mid ah, waa sida ay u ekaan laheyd!
Sida loo habeeyo noocyada farta ah ee Adobe Illustrator
Aynu wax badan ka hadalno qorista! Fonte ayaa loo rogi karaa istaroog, jab, deform oo aan la ciyaari karno iyaga. Aad ayaan uga cagajiidayaa inaan sameeyo, laakiin haye, abuuritaanka astaamo waa ilo wanaagsan waana inaad ogaataa. Aan aragno tusaale:
Aynu dooranno farta Faylka Madow, oo waxaan qori doonaa magacan. Sida ay hadda tahay, wax yar oo aan ku qaban karno ayaa jira. Waa inaan u badalno qaab-qorista istaroog. Taas awgeed, waxaan ku xulannaa aaladda xulashada, oo waxaan aadeynaa tabta qoraalka> abuuro tilmaamo. Kahor intaadan sameyn, hubi in qoraalka si wanaagsan loo qoray, maxaa yeelay mar dambe ma awoodi doontid inaad tafatirto!
Adoo abuuraya shaxanka, waxaad ula dhaqmi kartaa qoraalkaaga sida istaroog kasta oo Sawir qaade kale ah. Sidii aan ku samaynay qaababka, aaladda xulashada tooska ah waxaan u janjeedhayaa dhammaadka i iyo barta “i” labaad waxaan u beddelaynaa nooc caleen ah, taas oo aan ku siinayo tan midab turquoise. Waxa xiisaha leh ayaa ah in erayga oo dhan loo isticmaali karo astaan ​​ama "i" oo ah sawir madax-bannaan.
Tijaabi astaamahaaga mockups ee Photoshop
Fikrad fiican in la arko haddii astaantaadu shaqeyneyso ayaa ah in lagu abuuro majaajillo Photoshop ah. Waa habka ugu fiican ee si dhakhso leh loo arko sida ay u ekaan doonto xaqiiqda iyo sida loo hirgelin karo.Maxaad u malaynaysaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo abuuro astaan ​​leh Adobe Illustrator talaabo talaabo ah